ဆူရှီ ခေါ် ဂျပန်ထမင်းလိပ် ပြုလုပ်နည်း ~ ဂျပန်ပြည်မှပါးသောစာလွှာ . . .
ဆူရှီ ခေါ် ဂျပန်ထမင်းလိပ် ပြုလုပ်နည်း
6လပိုင်းထဲဝင်တာနှင့်အတူ ကျမလည်းအသက်တနှစ်ပိုကြီးလာပါတယ်။ တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စားဖွယ်တခုခု ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးကပ်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ကျမ၊ ရှားရှားပါးပါးနားရက်မှာ အပြင်လည်းသိပ်မထွက်ချင်ပါဘူး။ သူကတော့ ကျမကိုမွေးနေ့မှာ စိတ်လန်းဆန်းအောင် သွားစေချင်တော့ မနက်ကျမနိုးတော့ သူက smoky ဆော်လမွန်ငါး၊
明太子မန်းတိုင်းကိုလို့ခေါ်လို့ ငါးဥလေးတွေရယ်၊ ကုန်နေပြီဖြစ်တဲ့ Basil ဆော့စ်နှင့်
ရေညှိပြားတွေဝယ်လာပေးတာမို့ ကျမလည်း မြန်မြန်လုပ်ပြီး သွားကပ်ဖြစ်တာမို့ တလက်စတည်း ဆူရှီလုပ်နည်းလေးဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
California Roll Style နည်းကို မှီငြမ်းပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့၊ အရသာပေါ့လျှင်ကောင်းတယ်
မထင်တဲ့ ကျမတို့ မြန်မာအကြိုက် အရသာကို နည်းနည်းလိုတိုးပိုလျှော့လုပ်လိုက်တာမို့ ကျမဘာသာစားတာတော့အတော်အကြိုက်တွေ့ပါတယ်။
1.နော်ရိ ခေါ် ရေညှိပြားကြီး ၁လိပ်လျှင် ၁ချပ်နှုန်း
2.ဆူရှီမှုန့် (寿司粉)ခေါ် အမှုန့် စာအိတ်ပါအချိုးအတိုင်း (မရှိလျှင် ဗာနီဂါအနည်းငယ်ထည့်ပါ)
3.ထမင်း (နဲနဲကလေး တင်းတင်းကလေး၊ မပျော့စေရန်ဂရုစိုက်ပါ)
4.Smoky Salmon (ဆော်လမွန်ငါးကို အစိမ်းထည့်လည်းရပါသည်)
8.သခွားသီး (အရှည်လိုက်ပါးပါးလှီးကာ အတွင်းပိုင်းသားကိုလှီးထုတ်သည် ရေဓါတ်မပါရန်)
9.မုန်ညှင်းနု သို့ ဟင်းနုနွယ်ရွက် (အပင်လိုက်ရေစေးကာ ရေနွေးဖျောကာ ရေညှစ်သည်
ထည့်ခါနီး အမြစ်ပိုင်းဖြတ်ကာ တပင်စီယူထည့်သည်)
11.ကြိုက်တတ်လျှင် ရေညှိအသေးရွက်လေးများ (ရေညှိရွက်အကြေ)
1.ထမင်းလိပ်လုပ်သော ၀ါးဇကာပေါ်တွင်ရေညှိရွက်(ကြီး)ကို ချောသောဘက်အား
ထမင်းမခင်းသော နေရာအဖြစ် 1လက်မခန့် နေရာချန်ပါ။
3.ယင်းနောက် ယခုကဲ့သို့ ထည့်ပါသည်။ (ထမင်းလိပ်လုပ်စဉ်ကပုံမရိုက်လိုက်၍ ကြက်ဥလိပ်ပုံဖြစ်ပါသည်။)
2.ယင်းနောက် ဓါးတွင်ရေအနည်းငယ်စွတ်ကာ အလိပ်၏တခြမ်းတိတိ အလယ်ကိုလှီးပါ။
Posted in ဂျပန်အစားစာ
ပုံအရတော့ တစ်ခုကိုတစ်တုံးဘဲအစ်မဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းစားကြည့်ရင်နှစ်ခါလောက်စားမှအဆင်ပြေတာညီမကတော့တစ်လုတ်ကိုတစ်ခုဘဲး)ဂျပန်စာတွေကိုကြိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆူရှီတို့တူနာတို့ပေါ့.။တို့ဟူးလဲပါတယ် :)ကျေးဇူးပါအစ်မ..ချစ်ခင်လျှက်မိစံ
အချားပုပ်တဲ့ မိစံ :D
စားချင်နေတာ လုပ်မလို့အတော်ဖြစ်သွားဘီမနှင်းဆီလေးရေ တာတာ ချစ်တဲ့ ဂျာရစ်း))
ဟုတ်တယ် မရှင်လေး လူစုပြီးစားရင် ပျော်ဖို့ကောင်းတာနော် ;Dမကိုးကတော့ တခုပီးတခုလုပ်စားနေတော့တာပဲ ပီးရင် ဗိုက်အောင့်တယ်ပြောနဲ့နော် :D
တိုဖူးလုပ်နည်း နှင့် တိုဖူးသုပ်
မိတ်ကပ်ရည် Aqua Lift BB
2013ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ၊ မြန်မာပြည် နှင့် ကျမ (2)
အဝေဖန်ခံနိုင်သောသူလိမ္မာ၏။ တကယ့်သတ္တိဆိုတာ တစ်ခြားလူ ဘယ်လိုပြောပြော မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတာကိုခေါ်တယ်။ရေက လှေကိုထမ်းထားနိုင်သလို လှေကိုလည်း မှောက်ပစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် လှေထဲရေမဝင်ရင် လှေဘယ်တော့မှ မမြှုပ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက ကိုယ်မှန်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ယုံကြည်မှုကို ကိုယ်ကြံ့ကြံ့ခံထားရမယ်။ မတရားတဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုကို မပျက်ပြားစေသင့်ဘူး။D-Man(The secret of success inspiring )မနိုင်းနိုင်းစနေဘာသာပြန်သည်။
ခြင်္သေ့ဆိုတာ ယုန်ငယ်လေးကိုဖမ်းလည်း ဒီအင်အားပဲ။ဆင်ကြီး ကျားကြီးကိုဖမ်းလည်း ဒီအင်အားပဲ။တခုခုလုပ်တဲ့အခါ အင်အားအပြည့်စိုက်လုပ်ပါ။ဘယ်လောက်ထက်တဲ့ဓါးပဲဖြစ်ဖြစ်မသွေးပဲထားရင် တုံးသွားတတ်တယ်
အလုပ်ကောင်းမှ ကံကောင်းမည် ပေါ်လီယာနာထုံးနှလုံးမူလို့ကောင်းသောဘက်သို့ဦးညွှန်တွေး ကောင်းတာလုပ်ကကောင်းတာတွေဖြစ်လာမည်။တစ်နေ့တလံ ပုဂံဘယ်မရွေ့စိတ်ဓါတ်ခိုင်ကြည်သူဟာနေရဲ့ရင်ခေါင်းကိုတောင်ခွဲနိုင်တယ်
Education for Myanmar Youth
Mon Petit Avator
Myanmar Times ဂျာနယ်
ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Japan Immigration
ဇော်ဂျီနှင့်ဝင်း စာလုံးပြောင်းလျှင်（Win Font Converter）
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးစဉ် ယမန်နေ့က စတင်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ယမန်နေ့က အလုပ်သဘောကိစ္စအတွက် ရန်ကုန် ကနေ စတင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ ၁၉၆၆ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းရဲ့ ခရ...
ရေးဖြစ်သော အကြောင်းအရာများ နောက်ဝယ်
တကယ်ဆို စာတွေ ရေးနေဖြစ်တာတွေ မြင်တွေ့ တာတွေ ကို လက်တန်းရေးချတော့ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိတာထက် ရေးနေရင်း မလိုအပ်တော့တာတွေ တွေ့ လို့ ဆိုတာထက် မလိုချင်သူတွေ အတွက် အ...
Rakhine Rice Noodle Soup
*May Kitchen ၊ မေ ၁၈၊ ၂၀၁၃*
အဖွား နဲ့ အမေတို့ ရဲ့ အသည်းစွဲပေါ့။ အဖွားနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတိုင်း အမေက အမြဲချက်ပေးတတ်တယ်။ပုံမှန်လဲ တလကိ...
ယနေ့ညကို ခင်ပိုင်သည်. ။ Vehicle 19 ကိုရွေးရခြင်းမှာ မင်းသားကြောင့်ဖြစ်သည် . ထိုမင်းသားမျိုး ခင်ကြိုက်သည် ခင်လိုလူမျိုး...
Mobile Apps Development : Part 4
အပိုငျး ၁ ၊ အပိုငျး ၂ ၊ အပိုငျး ၃ Apps တဈခုကို ဖနျတီးတဲ့အခါမှာ iOS , Android စတာတှကေို တဈခါတညျးရေးပွီး ၂ ခုလုံးမှာ run လို့မရဘူးလား။ cross platform ရေးဖိ...
Number of View: 318 ဒီနှစ်နွေက အရင်နှစ်ထက် ပိုပြင်းတယ်။ အပူရှိန်တွေက တရိပ်ရိပ်နဲ့။ သင်္ကြန်မှာ ပိတောက်နဲ့အတူ သင်္ကြန်မိုးကို မျှော်ခဲ့ပေမယ့် ပိတောက်က မိုးနဲ့အ...
*အိုင်အိုဝါ ရက်စွဲများ အပိုင်း (၃)*
*၈။ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းဟောပြောပွဲ*
စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ စာကြည့်တိုက်မှာ ကျင်းပတဲ့ ကျားမဖြစ်တည်မှု ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ...
ထမင်းတစ်ဆုပ် သဲတစ်ဆုပ်နဲ့ ဘ၀
အိမ်ကိုမှ တည့်တည့် ပြန်တတ်သူရဲ့ကြာ...
အံမခန်းအနုပညာလက်ရာနဲ့ ခမာတို့ ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု့ 
ကမ္မောဒီးယားကပြန်လာပြီးမှ Smithsonian Channel ကနေလာတဲ့Angkor သမိုင်းအကြောင်း၊
တွေကိုကောင်းကောင်းပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။(Land of God ဆိုတဲ့နေရာကနေ...
သိစိတ်ကို ဖမ်းမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲ
တကယ်ဆို ဒီဘာသာကို ကျွန်မ လေ့လာဖို့ မသင့်ခဲ့ပါ..။
ပရိုတွန် (proton)၊ အီလက်ထရွန် ( electron)၊ နယူထရွမ် (neutron) ဆိုပြီး...
အရသာရှိပြီး အမြင်ဆန်းတဲ့ သာကူအချိုပွဲလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ပုံမှန်သာကူပြင်နဲ့ မတူပဲ ပင်မှည့်သီးနဲ့ ထန်းလျက်လေးပါ ထည့်ထားတာကြောင့် ချို၊ချဉ်၊...
Happy Mothers Day!!! I Love You!! You always give me my wants and needs,
And even though I might not exceed to your expectations,
You gave me everything t...
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ ရှိကြမြဲပါ…။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်သူကလဲ သူ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုနဲ့ သူ… ၀န်ထမ်းလုပ်သူကလဲ စိတ်ပင်ပန်းမှုတမျိုး… အိမ်ထောင...
*ရွာနေတဲ့ မိုးစက် လက်နဲ့ခံ ကြည့်လိုက်တယ်*
*လက်ကတော့ အေးစက်ပြီး နှလုံးသာ ပူလောင်နေဆဲ*
*ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါမှ *
If you visit this standing Buddha, make sure you go up to the Buddha and see the surrounding like this. The view is amazing and you also can get idea of ...
ဂျပန်စာခန်းဂျီးလေ့လာလိုသူများအတွက်ပါ။ ဂျပန်က မူလတန်း ၆နှစ်တာကာလမှာ ခန်းဂျီး တစ်ထောင့်ခြောက်လုံး သင်ရပါတယ်။ First grade မှာ အလုံး ၈၀၊ Second grade မှာ ၁၆၀လု...
ညီမလေး အမျိုးသားအကြောင်းပြောပြမယ်.. နားထောင်မလား လို့မေးလာတဲ့ သူငယ်ချင်း မမွန်ရဲ့ စကားကို ရင်ခုန်မိနေတယ်။ တသိမ့်သိမ့်ခုန်ခဲ့တဲ့ ရင်ခုန်ခြင်းတွေေ...
ကျမက ဗမာပြည်ရှိ အစားစာတွေထဲ နှစ်ခြိုက်ခုံမင်စွာစားလေ့ရှိတာက ရှမ်း ရိုးရာအစားစာတွေ
ပါ။ ဒီတခါတော့ ဆန်စီး တိုဖူးနွေး လုပ်စားပါတယ်။ မမချောဆီက နည်းသွားယူပါတယ်။
တစ်လတစ်မျိုး မရိုးအောင် ဆန်းသစ်နေတဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်းများကို သားငယ်တို့ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့ စုစည်းပြီး ၂၀၁၂ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ လစဉ်ထုတ် ဂိမ်မာမဂ္ဂဇင်းအဖြစ် မြန်...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မျိုးစုံကိုလုပ်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ တဖြေးဖြေး ယိမ်းယိုင်လာပြီးနောက်မှာ ဘယ်လိုမှ ပြန်အဖတ်မဆယ...
*နွေရာသီ၌ ကျွန်တော်ထင်သလိုနေခဲ့သော်လည်း မိုးရာသီသို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ ကျွန်တော် လယ်ထဲသို့ လိုက်ရသည်။ ခင်စန်းကြည်မှာ ရွာရှိအိမ်ကြီး၌ပင် နေခဲ့၏။ ထိုအခါ၌ အဘွာ...
*တိုဟူးသုပ်* တိုဟူးသုပ်အတွက် ပဲမှုန့်နဲ့ကြိုပီးလွှင့်ပစ်ရအခါခါကျွန်မအတွက်တော့ မွှေးတိုဟူးမှုန့် နဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကြိုရတာလဲလွယ်ပီး သုပ်စားလဲအရမ်းအရသာရှိ...
If you don't mind , i like haveahelp from you.
Once again I want to confirm that Are you staying @ Vietnam?
Because One of my...
အ ခု ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း capacity building training တွေ ခေတ်စားလာနေပါတယ်။ ပိပြားနေ အောင် အုပ်ချုပ်ခံလာရတဲ့ နှစ်တွေက ရာစုနှစ်တဝက်လော...
Mark ကလေးက FWD.us ကို launch လုပ်လိုက်ခြင်း
ဖေ.ဘွတ်တည်ထောင်သူ Facebook CEO Mark Zuckerberg
က နိုင်ငံရေးနဲ. သက်ဆိုင်သော အဖွဲ.တစ်ခုကို ဖွဲ.စည်းလိုက်ပါတယ်။ ယခု တစ်လော အမေရိကန်မှာ
hot topic ဖြစ်နေတဲ. Immig...
သင်္ကြန်ရောက်တော့မယ်။ ဒီနှစ်တော့ဂျာမနီမှာ နေကမထွက်၊ ဆောင်းက
မကုန်နိုင်တာနဲ့သင်္ကြန်ရာသီက အရင်နှစ်တွေကလို စိမ်းစိမ်းစိုစို မရှိပါဘူး။
ကျမ အတာအိုးထိုးဖို့အိမ်န...
ဒီပုံလေးကို ဖဘ ကနေတွေ့လို့ အတွေးလေးတွေပွားမိပါတယ်။ ကိုယ်ကပဲ အတွေး ကလန်ကဆန် တိုက်လွန်းအားကြီးတာလား လူတွေကပဲ အကောင်းမြင်လွန်းတာလား ကိုယ်ကပဲ အဆိုးမြင...
ဦးဟန်ကြည်တို့တစ်တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်ရင်တော့ ထင်တစ်လုံးနဲ့ ဘ၀င်နှလုံးမှာ ရွှင်ပြုံးနေကြတဲ့ လူတွေချည်းပေါ့။ ငါမှငါ၊ ငါဟာ အတော်ဆုံး၊ ငါဟာ အတတ်ဆံ...
အိမ်ရှင်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ တည့်အောင်နေဖို့လို By သီတဂူဆရာတော်
ယနေ့ နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်နေရာမှာ အသေးအမွှားကိစ္စလေးကနေ ဘာသာရေး မငြိမ်မသက်မှုတွေ အထိ ရောထွေး ဖြ...
လူကိုပဲကြည့်ကြည့် ဘယ်အရာဝတ္တုကိုပဲ ပထ၀ီ၊တေဇော၊အာပေါ၊ ၀ါယော ဆိုတဲ့ ဓါတ်ကြီးလေးပါး ရယ် ကာလ- ဟင်းလင်းပြင်ကြီးကိုသာ တွေ့တွေ့နေရတယ် ဒါပါပဲ ဆရာ့ရေ ပုထုဇ...
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာမှုနဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေက ပြောင်းလဲတယ်.. ခပ်ငယ်ငယ် ကလေးအရွယ်တွေမှာ.. ဆိုရလွယ်တဲ့ သံစဉ်ချိုတဲ့ ခ...
ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲရှိလို့ ပြောကြဆိုကြ ဆွေးနွေးကြရင်း ဆရာကြီးတစ်ဦးက ဆောင်းပါးတစ်စောင်ဖတ်ပြတယ်။ ဂျာနယ်က ပယ်လိုက်တာတဲ့ ။ ဒါကို ဆရာကြီးတစ်ယောက်က ဖတ်ပြတယ် ။ အသ...
ဆံပင်အကောက်နဲ့ ထပ်မြင်ဖူးချင်ကြပါသတဲ့။ ဟဟ ဘယ်လိုကောက်လည်း မမေးနဲ့ သင်ဆရာတွေက၊ ထုံးစံအတိုင်း Youtube ပေါ့ကွယ်။ အိုင်းရှဲဒိုး၊ ဆိုးထားတာ မေးလို့ ထုံး...
ရန်ကုန်ကို ဂျပန်ကပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်ကပေါ့၊
အားလုံးသော ချစ်မောင်နှမများ မင်္ဂလာပါရှင့့့်  ဒီနေ့တော့ ကျွန်မရဲ့ မောင်နှမတွေထဲက ပြည်ပရောက် မောင်လေးရန်နိုင်က အသားဟင်းတွေချက်တဲ့အခါ နူးအိအိလေး ဖြစ်ချင...
ညအိပ်ချိန်ရောက်ပြီ။ အိပ်ရာထဲဝင် မီးပိတ်ပြီးပေမဲ့ ဂျူဂျူတစ်ယောက် အိပ်မပျော်သေး။ အိပ်မပျော်တော့ အမေလုပ်သူကို တောင်ရောက်မြောက်ရောက် ထွေရာလေးပါး လျှောက်ပြောေ...
ပိုက်ဆံစာအုပ် အတွက် ရေးထားတာ။
နေသည် ကျဲကျဲတောက်ပူနေ၏။ တကယ်တော့ ပူနွေးစိုစွတ်သောဒေသတခု၏ နွေရာသီ နေ့ခင်းမှာ နေပူတာ အဆန်းတော့မဟုတ်လှ။ သို့ပေမဲ့ ပူလွန်းတာက...
“ဒုတိယအိမ်၏ (၂၀၁၃)ခုနှစ်အတွက် နှုတ်ခွန်းဆက်လွှာ”
*Bliss of Us* စာမျက်နှာကို လာရောက်ကြည့်ကြပါသော အွန်လိုင်းစာဖတ်သူအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံတဲ့ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နေကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ...
Happy New Year! နှစ်သစ်တောင်ကူးသွားပြီ၊ ၂၀၁၂ တစ်နှစ်လုံးမှာ ပို့စ်ပေါင်း ၉၀ ပဲတင်ခဲ့တယ်၊ တစ်လကို ၇ ပို့စ်ခွဲနှုန်း၊ တစ်ရက်ကို ပို့စ်တစ်မတ်သားနှုန်းပေါ့။ အဲ...
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများအတွက် Central Venous Catheters ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.အကယ်၍ ဒေါင်းလို့ အဆင်မပြေသူများ myanmarnurses.sg@gmail...
စားချင်တာတွေလည်း စား ချစ်သူခင်သူ ဘော်ဒါများနဲ့ 
၁၈၉၂ခုနှစ် နွေရာသီတစ်ခုမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Missouriပြည်နယ်မှာ မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်ခဲ့တယ်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် လမ်းမ၊ နေအိမ်၊ လယ်ယာစိုက်ခင်းတေ...
စာရေးနေရင်းနဲ့နာရီကို မော့ကြည့်တော့ မနက် ဆယ်နာရီ ကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အမေက
ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ပြီး ဘုရားရှိခိုးနေတော့ တအိမ်လုံးက တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲ။
မောင်, ကိုကို နှင့် မရီတာ (အဆုံး)
(ကိုကိုကတော့ အများကြီး ပေးချင်ခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ညီမလေးက ဘာမှ မယူလိုခဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့)
*** ပြန်ဖို့အသင့်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် သူမ၏ နောက်ဆုံးဓါတ်ပ...
ညမွှေးပန်းရနံ့တွေ အားပါးတရ ရှူရှိူ...
ဂျပန်မှာ အတော်နေသားကျပြီး၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု နဲ့နေထိုင်မှုပုံစံ ကို နှစ်သက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို သွားရောက် ...
ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတခု.. ဆိုတော့ ဖြစ်စေချင်တာတွေ ကို ဖေါ်ထုတ်ရေးသားမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတခုပါပဲ ။ ခံစားချက်ခြင်း မတူကွဲပြား ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ် ။ မတူတဲ့ခံစား...
ငွေစန္ဒာအတွက် ရည်စူး၍ နှစ်လည် အလှူပွဲ ကျင်းပခြင်း
နှစ်လည် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၄.၇.၂၀၁၂ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော 'ငွေစန္ဒာ (သို့မဟုတ်) စက္ကန့်တိုင်းကို စိန်စီသွားသူ' ဆောင်းပါးကို မေတ္တာဖြင့် တုန့်ပြန်ကြ သော ဘ ...
with Japanese Language support, and also online kobo books shop available.
Also its even cheaper than Kindle (not Kindl...
ကလေးလေး ဖိုအင်္ဂါ မအင်္ဂါ နှစ်ခု ပါနေတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ဘာကြောင့် ရှဲ နေကြတယ် နားမလည်ဘူး။ ဟိုမိဘတွေက ချို့တဲ့ရှာလို့ ထားပါတော့။ ကိုယ့်သားသမီးသာ ...
ကျွန်မ အမျိုးသားက ငါးဖယ်ကြော်ပလိန်း၊ ငါးဖယ်ချက် ...
လေကြောင်း၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကဲ့သို့ နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် စီစဉ်ထား အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက အကျိုးတူလုပ်ကိုင်မည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး အများပိုင် ကုမ္ပဏီများဖွဲ့၍လည်း လျှောက်ထား ရယူနိုင်
[image: b5_5_06s]လေကြောင်း၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကဲ့သို့ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် စီစဉ်ထားကြောင်း...
ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်မယ်ဆိုချက်စားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး… ရွှေကန်စွန်းဥမရှိတာနဲ့ ရှိတာထည့်မယ်ဆိုပီး ငချိတ် ကန်စွန်းဥ ထည့်လိုက်တော့ ခရမ်းရောင်သန်းနေတဲ့ သာကူကျိုလေးဖြ...
The abase house sparrow has fans outside the rarefied world of birdwatchers. “It's because *successive generations arose up* with this passerine bird. It'...
Liverpool မြို့ငယ်ကလေးရဲ့ အလယ်မှာတော့ အဓိက ပင်စင်စားများ လာရောက်ပြီး စားသောက် အချိန်ဖြုန်းလေ့ရှိတဲ့ Liverpool Club ဟာ ရောင်စုံမီးများ ထွန်းညှိထားကာ Club ထဲ...
တရုတ်ကျောင်းသား တစ်သိန်းခွဲကျော် အမေရိကတွင် ပညာသင်ကြားနေ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ တရုတ်မိဘတွေကလည်း ၄င်းတို့ သားသမီးများကို အမေရိကန်ပြည်ထေင်စုရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ပိုမ...
မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် လတန်ဆောင်တိုင် / ကိုမြကြီး နှင့် အဖွဲ့ by TLwin2 link: http://soundcloud.com/user8265829/12-myaing-myaing-saing-saing?utm_sour...
ပုစွန်ဂရုတ်ပွကြော်၊ ရှီရို့အူရိ ဟင်းခါးကို အရည်စစ်ထည့်၊ ခရမ်းချဉ်သီး ငါးပိချက်။
ချာနိုဘိုင်း ညူကလီးယားပြဿနာ ဇာတ်သိမ်း
Chernobyl Nuclear Accident: Last Part မီးလောင်ခြင်း ပေါက်ကွဲမှု ၂ခု ဖြစ်တာကနေ အလွန်ပူပီး ရေဒီယိုသတ္တိကြွ နေတဲ့ လောင်စာချောင်းတွေ၊ ပေါင်းဖို နဲ့ အဆောက်အဦရဲ့ ...
မနေ့ကချက်တဲ့ ဆိတ်ရိုးစွပ်ပြုတ် တင်လိုက်ပါတယ်နော်။ ခုတစ်လော ရုံးပိတ်ရက်ဆို ရာသီဥတုကလည်း ကိုယ်တော်ကြီးဘက် ပါပါနေတယ်။ အဟဲ ။ ဒီအပတ်ပါဆို ပိတ်ရက် ၂ ပတ် ဆက်တိုက်...
သူမက အလှကြီးထဲက မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မိန်းမ ဆိုတော့လည်း ကျွန်တော့် အတွက်တော့ လှတယ်ပေါ့။ ဒီလိုပဲ ပြောရတာပဲ။ ပြောချင်တာကတော့ သူမက အ၀ကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေး မရ...
Lately I tried to update Drupal6to 7. I broke my rule, that is, I tried through Fantastico. Asaresult, all messed up.
So I need to repost from backup...
PC world magazine 2011 April
ဒါကတော့PC world magazine ရဲ့2011 Aprilထုတ်ပါ။ Code: --------- http://www.fileserver.cc/9kxqht803rer.html ---------
၀က်သားပဲငါးပိချဉ်စပ်၊ မှိုထောင်း၊ မုန်ညင်းဟင်းချို
ဒီတစ်ခါတော့ ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းတွေဆီက ဟင်းလေးတွေတွဲဖက်ပြီး နေ့လည်စာ စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်.. ချက်ရတာလည်း လွယ်ပြီး စားလို့လည်း မြိန်ပါတဲ့ ဟင်းလေးတွေပေါ့.. ၀က်သားကို ပ...
အိုဆာကာကို ရောက်လာပြီး ၁ နှစ်ကျော်ကျော်လောက်အထိ ကျမတို့ အိမ်မှာ တီဗွီ မရှိပါဘူး။ သူရော ကျမပါ ကွန်ပျူတာ တစ်ယောက် တစ်လုံးနဲ့ပဲ နေဖြစ်ခဲ့တာ။ အဲဒီတုန်းက တွေးမ...
မှတ်မှတ်ရရ Hokkaido ကျွန်းရဲ့ပုံရိပ်လွှာများ
စာမရေးဖြစ်တာ ၃လလောက်တောင် ရှိပါပြီ။ တကယ်က ဘလော့လေးကို ခဏထားပြီး ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လုံးပမ်းနေရတာလဲ ပါတယ်၊ အမတွေ တူမတွေဆီ ခရီးထွက်နေရတာလဲ ပါပါတယ်...
See my photos and favorite places
I'm putting togetheracollection of photos where I've been. Check it out:
http://gowalla.com/users/BarNyar - BarNyar
[image: Gowalla] — Discove...
ဒီကနေ့ က သက်ဆိုင်သူကြီးရဲ့ မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အခါသမယပါ...ပိတ်ရက် မဟုတ်လို့ သူလဲ ကိုယ့်ဆီမလာနိုင်သလို ကိုယ်လဲ သူ့ ဆီ မသွားနိုင်လေတော့...မွေးနေ့ ပွဲကို ခမ်းခမ်းနာ...
Copyright © 2011 ဂျပန်ပြည်မှပါးသောစာလွှာ . . . | Powered by Blogger